Imizobo eqingqiweyo kaMichael Wilkinson | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubugcisa be UMichael Wilkinson Imele yonke into ebabazekayo kwaye intle emoyeni womntu, isebenzisa eyona ndawo ilungileyo ukusikhombisa amathuba ebomini kunye nezinto ezinokubakho ngaphakathi kwethu.
Uzalelwe ngaphakathi California kwaye yenziwa njenge uyilo, UMichael Wilkinson waqala umsebenzi wakhe wobugcisa kwi ENew York ngo-1979. Ngo-1985, uWilkinson wasuka ekusebenzeni ngokukodwa ubhedu, ukusebenza kumbindi omncinci we i-acrylic eyenziwe. Un precursor en el medio, Wilkinson utiliza acrílico para crear mundos oníricos, comunicar temas complejos al mismo tiempo la incorporación de realismo en su arte.
Ngokungafaniyo nemveli, le mifanekiso iqingqiweyo ye-acrylic azinasiqalo nasiphelo, ngaphandle nangaphandle.Le mifanekiso eqingqiweyo ibonwa ngendlela entsha, ifundwe kwaye iqatshelwe ngokupheleleyo ukusuka ngaphakathi nangaphandle. UWilkinson usebenze kwi-acrylic phantse ishumi leminyaka, uWilkinson uhlala eyandisa italente yakhe yokuqingqa "ukukhanya" ngeendlela zoqobo.
Imifanekiso yam eqingqiweyo ye-acrylic ingumxube weefomati kunye neefom e-abstract, ukudibanisa indalo kunye ne-acrylic kufanelekile. Ndiqala ngodongwe, i-clod yomhlaba, kodwa ndigqibele ngokudala umhlaba okhokelwa kukukhanya. Into entle yomfanekiso oqingqiweyo we-acrylic kukuba kucacile ngaphakathi, "njengendawo yesine" evumela umbukeli ukuba ajonge kulo msebenzi. Eli nqaku libonelela ngomceli mngeni omkhulu ekusebenzeni kunye nezinto eziphathekayo kuba imodeli yoqobo eqingqiweyo yenziwe ngodongwe oluhombisa. Ngelixa udaka ludaliwe okanye ukwenziwa kwemodeli, kuya kufuneka ucinge ngokudaka okwenzekayo ngaphakathi emsebenzini.
Ukuba unayo imali eyaneleyo, UMichael Wilkinson uthengisa imifanekiso yakhe eqingqiweyo ebayCofa kwindawo elandelayo unxibelelwano ukujonga, ungoyiki lixabiso.
Fuente [UMichael Wilkinson]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Imizobo emihle kaMichael Wilkinson